Fanondranana an-tsokosoko :: Miandahy miambavy ireo teratany vahiny tra-tehaka • AoRaha
Fanondranana an-tsokosoko Miandahy miambavy ireo teratany vahiny tra-tehaka
Nahatrarana lehilahy sy vehivavy mpanondrana volamena an-tsokosoko eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Voalaza fa teratany vahiny sy Karàna ny ankamaroan’ireo tra-tehaka sy tena mpanao trafikana volamena, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra iray ao amin’ny Fadintseranana, eny Ivato.
Manodidina ny iray kilao sy sasany (1,470 kg) ny vovoka volamena nokasaina haondrana an-tsokosoko saron’ny mpiasan’ny Fadintseranana, teny Ivato, nanomboka tamin’ny volana jona lasa teo. Tsy nahazoana tatitra ny isan’ny olona voasambotra sy natao famotorana momba ireo volamena ireo.
«Tsy tazana eo amin’ny fitaovam-pitsirihana (scanner) ny fisian’ireo vovoka volamena fa tamin’ny fisavana natao no nahatrarana izany. Nisy, ohatra, no sarona rehefa nafenina tao anaty firavaka. Nisy ihany koa ny vovoka volamena nampiarahana tamin’ny vovo-dronono sady nafenina tao anaty menaka fanadiovana kiraro avy eo. Matetika amin’ny andro sabotsy sy alahady no fanaovan’ireo mpanao trafika ny asa ratsiny», hoy ny fanazavan-dRabenandrasana Dinasoa Nirina, resevera eo anivon’ny Fadintseranana, eny Ivato.
Efa tena hentitra ny fisavana atao eny amin’ny seranam-piaramanidina saingy mahita hevitra sy fomba fanafenana hatrany ireo mpanondrana an-tsokosoko, araka ny nambaran’ity tompon’andraikitra ity hatrany.
Ankoatra ireo vovoka volamena ireo dia safira milanja 255 grama no saron’ny mpiasan’ny Fadintseranana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, tato anatin’ny efa-bolana, araka ny tatitra voaray. Nisy ihany koa ny vovoka rongony « héroïne » tsy latsaky ny enina kilao nentina lehilahy Tanzaniana iray. Ity farany no efa voatazona am-ponja vonjimaika. Basy lava roa sy basy poleta iray no tra-tehaka teny Ivato ihany koa.
«Misy amin’ireo fahatrarana entana saika naondrana an-tsokosoko ireo no nisamborana olona. Nisy kosa ny entana ihany no tratra satria nandositra ny tompony. Natolotra ny polisy misahana ny sisin-tany (PAF) ireo voarohirohy tamin’ireo basy sarona », hoy ihany Rabenandrasana Dinasoa Nirina.
Fandrobana miharo herisetra :: Mpanendaka mitondra basy sandoka sady midaroka